Misoro yeNhau, Chishanu Zvita 04, 2020
Bazi rezvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa uye zana nemakumi masere nemumwe, kana kuti 181, vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 munyika yose.
Vamwe vagari vekuPenhalonga mumusha weTsvingwe, kuOld West muMutasa South mudunhu reManicaland vari kuchema-chema nenyaya yekusvibisirwa mweya wavanofema zvichitevera mabasa ekucherwa kwegoridhe ari kuitwa kunharaunda iyi zviri kunze kwemutemo nemakorokoza.
Hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chekuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanika munzvimbo yeGreater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area mukutanga kwegore rinouya.
Vateveri venhabvu muEngland vari kudzoka mudzinhandare kunoona mitambo svondo rino panguva iyo FC Platinum iri kuda kupedzisa chikwata cheCosta do Sol chekuMozambique mumutambo weCAF Champions League.
Muchirongwa chedu cheLivetalk na 8 pm nhasi, tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCovid-19, sarudzo dzeDCC dziri kutarisirwa kuitwa nebato reZanu PF mukupera kwesvondo, pamwe nezviri kuitika mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica .
Vanotenga neKutengesa Zvinhu Voyambirwa Kuruka Mazano Zvichitevera Kukwidzwa kweMitero yeZvinhu Zvavanotenga Kunze
Vechidiki Vokurudzirwa Kutanga Mabasa Avonogona Munguva yeKuvharwa kweNyika Nekuda kweCovid-19
VaBiden Votariswa Kuzeya Kuti Vowedzera Here Kana Kuti Kwete Zvirango Zvakatemerwa Vamwe Vakuru muZimbabwe